Muxuu Mahrez ka yiri kulanka ay PSG ku wajahayaan lugta hore ee afar dhammaadka Champions League? – Gool FM
Muxuu Mahrez ka yiri kulanka ay PSG ku wajahayaan lugta hore ee afar dhammaadka Champions League?
Dajiye April 27, 2021
(Manchester ) 27 Abriil 2021. Ciyaaryahanka Manchester City ee Riyad Mahrez ayaa sheegay in kooxdiisa ay ka go’an tahay inay ka gudubto niyad jabkii hore ee Champions League, isagoo isla waqtigaas carabka ku adkeeyay in koobka dhaga weyne uu yahay waxa City ka dhigi doona koox weyn.
Manchester City ayaa isku diyaarineysa inay ku wajahdo Paris Saint-Germain lugta hore ee semi-finalka Champions League fiidnimada Arbacada, kooxda Pep Guardiola ayaa dooneysa inay gaarto finalka tartankan markii ugu horeysay taariikhdeeda.
Ciyaaryahanka Manchester City ee Riyad Mahrez ayaa kahor kulanka habeen dambe ee Paris Saint-Germain, wuxuu warbaahinta u sheegay:
“Sanadkii hore wuxuu ahaa mid niyadjab leh, sanadihii ugu dambeeyay, waxaan isku dayeynay inaan diirada saarno ku guuleysiga horyaalka, laakiin ka bixistii Lyon waxay aheyd niyadjabkii ugu weynaa ee xirfadeyda ciyaareed.”
“Champions League waa tartanka aan wali ku guuleysan, uma maleynayo inuu jiro qof kooxda ka tirsan oo horay ugu guuleystay, yurub waa tartanka ugu fiican ee aad ku guuleysan karto.”
“Ma heysano ciyaartoy sida Messi ama Ronaldo ah, laakiin qof walba oo koox ah wuu awoodaa inuu isbedelka sameeyo.”
“Marka aad carruur tahay waxaad ku riyooneysaa inaad ka ciyaarto doorka noocan ah, semi-finalka iyo finalka, haatan waxaan joognaa halkan waana inaan horay talaabo u qaadnaa oo aan u ciyaarnaa sida aan ugu ciyaarno horyaalka ama Finalka Carabao Cup.”
“Waxaad u ciyaaraysaa kubadda cagta kulammada noocaan oo kale iyo doorka noocan oo kale ah, waan ogaa in hadii aan u saxiixo kooxdan iyo macalinkanba inaan gaari doono doorka noocan oo kale ah, berri waa inaan muujinaa inaan u qalano inaan gaarno finalka.”
“Tani waa waxa dhici lahaa haddii uu Neymar la sii joogi lahaa Barcelona.” – Pep Guardiola
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Real Madrid iyo Chelsea ee Champions League oo la shaaciyey